2020 US Bathroom Trends Chirevo: Smart Zvimbuzi, Sensor Faucets, Uye Tsika Yekugezera Makabati Ari Kuenda Kuve Anofarirwa!
musha / Blog / 2020 US Bathroom Trends Chirevo: Smart Zvimbuzi, Sensor Faucets, Uye Tsika Yekugezera Makabati Ari Kuenda Kuve Anofarirwa!
2020 / 11 / 02 kupatsanuraBlog 1806 0
Kicheni Uye Bhati. Kicheni Uye Bhati Misoro.
HOUZZ, webhusaiti yemabasa epamba yeUS, inoburitsa ongororo yegore rega yeUS yekugezera maitiro, uye iyo 2020 edition yemushumo yazoburitswa. Gore rino, HOUZZ yakaongorora varidzi vedzimba vanokwana 1,594 vekuUS avo vanga vachangobva kugadzirisa dzimba dzavo dzekugezera mugore rapfuura nezve izvo zvigadzirwa zvavakasarudza uye neshanduko dzipi dzavakaita pavakadaro. Mhedzisiro yacho inogona kupfupikiswa seinotevera: Zororo uye Varaidzo, Yakakwira-Tech, Mheni dzekuvhenekesa, Yekusimbisa Wall, Yemazuva ano Sanganisa, uye zvimwe.
- Zvigadzirwa zvekugezera -
OnKutendeuka Kwemabhati KuMashawa
Huwandu huri kuwedzera hwevaridzi vedzimba vekuAmerican vanoona imba yekugezera senzvimbo yekuzorora, ne41% yevaridzi vemba 1,594 vakaongororwa vachiti vanozorora uye vanozorora muchimbuzi. Nzira huru dzekuzorora dziri kugeza uye kugeza, ne55 muzana yevakapindura vachiti kupinda mubhavhu kunovabatsira kuzorora.
Kunyange basa rekuzorora remabhawa richizivikanwa, vanodarika makumi mashanu muzana yevakabvunzwa avo vakagadzirisa dzimba dzavo dzekugezera gore rino havana kushandisa mabhawa avo, uye 50 muzana vakatoti vakaabvisa. Uye yeavo vakapindura vakasarudza kubvisa mabhawa avo, mana-mashanu vakasarudza kuchinjira kugeza pachinzvimbo, ne23 muzana vachishuma vachiwedzera saizi yemusoro wavo wekugezera, kubva pakushandura marongero avo ekugezera (54 muzana) uye kuwedzera saizi yekugezera kwavo. (45 muzana).
OreVanhu Vazhinji Vari Kusarudza Yetsika Yekugezera Makabati
Pakati peavo vakasarudza kutsiva makabhati avo ekugezera, 36% vakasarudza makabati ewadhi yekugezera uye vamwe 21% vakasarudza makabati emukati-ekushambidzira, zvichiratidza chokwadi chekuti makabati etsika yekugezera ave kutanga kupinda mumusika weUS, nepo 28% vakasarudza makabhati imwe nzvimbo yekuchengetera. Panyaya yekushambidzika kabhineti dhizaini, 56% yevakabvunzwa vakasarudza yakavakirwa-mune yekugezera makabati, ichiteverwa nerusununguko (28%) uye madziro-akaiswa (15%), iine huwandu hwevakabvunzwa kusarudza madziro-akaisirwa zvigadzirwa zvinowedzera ne4 muzana mapoinzi.
ToSmart Toilets Aive Akakurumbira.
Gore rino, 17 muzana yevaridzi vedzimba veUS vakasarudza kuchinjira kuchimbuzi chine kamwene, kukwira zvikamu zvishanu muzana kubva gore rapfuura; 5 muzana uye 14 muzana yevakabvunzwa, zvichiteerana, vakasarudza zvimbuzi zvine kuzvichenesa-zvimiro uye zvigaro zvinopisa, izvo zvakagadzirirwawo nezvimbuzi zvine hungwaru. Uye zvakare, anti-kupenya, yakavakirwa-mukati mwenje mwenje, otomatiki muvharo pafiripi, otomatiki deodorization uye zvimwe zvinhu zvakakwezva kutariswa.
AsBasin Kudiwa Kunopindirana Negore Rakapera
Kuzivikanwa kwezvinhu zvakasiyana siyana zvebheseni kwaive kusati kwachinja kubva gore rapfuura, nenhamba huru kwazvo yevaridzi vedzimba vekuUS vachisarudza kutsiva bheseni ravo neinoshoreka (65%), ichiteverwa neyekuzorora (17%) uye mabheseni epa countertop (9%) . Uye zvakare, 68% yakasarudzawo kushandisa bheseni rakapetwa kaviri, rinova chikamu chakaenzana nemakore maviri apfuura.
▌Kuchengetedza Mvura, Sensor Faucets Ndeye Kunetseka Kukuru
Makumi masere nemanomwe muzana evose vakapindura vakatsiva mapombi avo. Pakati peavo vakatsiva mapombi avo, makumi masere muzana evaridzi vedzimba vaive neyaipapo imwe nyowani ine hunyanzvi hwepamusoro. Pakati pavo, 48% yevapombi vatsva vakapindura vane zvinhu zvekuchengetedza mvura, zvikamu zvina kubva muzana gore rakapfuura; 28% yevaridzi vemapombi matsva haanamatire minwe; 4% yemapombi matsva anogona kunge asingabatike, nhamba iyi yakawedzera nezvikamu zviviri muzana kupfuura gore rapfuura, zvichiratidza kuti mapombi enzwa ari kuwedzera kufarirwa.
Mwenje yeLED, Fogging In The Bath Mirror Inosarudzwa Features
Kune magirazi, 20 muzana vakasarudza zvigadzirwa zvine mwenje weLED, matanhatu muzana mapoinzi akakwirira kupfuura mugore rapfuura, uye paivewo nechimwe chikonzero chekudzivirira, ne14 muzana vachisarudza zvigadzirwa zvine chinhu ichi.
- Bathroom Space -
IleTile Ichiri Iyo Yakakura Yeiyo Yekugezera Nzvimbo
Pakatenderedza kugadziridzwa kwemadziro ekugezera uye pasi, huwandu hwakakura hwevanhu hwakasarudza zvigadzirwa zvemateera, iine 70% ichisarudza mataira emadziro, kuwedzera kwemana muzana muzana gore pagore. Ose madziro uye pasi, vanopfuura gumi muzana yevanhu vanosarudza machena, asi sarudzo yemarble yepasi yakadzikira ne4 muzana mapoinzi, zvichiratidza huwandu huri kukura hwevanhu vanofunga zvekuchengetedza dzimba dzekugezera.
OnNon-Shower Nzvimbo Dzakatanga Kuzivikanwa Mukushongedza Masvingo
Munzvimbo dzisingagezi dzekugezesa, vanhu vazhinji vakasarudza kutsiva mataira nechinhu chinoshongedza kupfuura munzvimbo yekugezesa, iine 77% yevakabvunzwa vachisarudza zvigadzirwa izvi, zvakakwirira kwazvo kupfuura 26% vakasarudza mataira. Nekudaro, munzvimbo dzisiri-shawa dzehuriri, huwandu hukuru hwevanhu (59%) vachiri kusarudza kushandisa zvigadzirwa zvemataira.
RevaPreiling Yemazuva Ano Style
Gore rino, makumi maviri muzana yevakabvunzwa vakati vaizosarudza masitayera echinyakare eimba yavo yekugezera, nhamba yakafanana neya20 uye 2019 muzana poindi yakakwira kupfuura yegore ra5, zvichiratidza kuti chimiro chemazuvano chinoramba chiri chimiro chakakurumbira muAmerican yekugezera dhizaini. Izvi zvinofananidzwa ne2018 muzana yevaridzi vedzimba vanosarudza Shanduko, kudzika 18 muzana mapoinzi kubva ku3, nepo huwandu hwevanhu vanosarudza Contemporary, Chinyakare uye Mufundisi vakadzikama uye kukwira kubva gore rapfuura.
Yakachena Inosara Yakanyanya.
Panyaya yevaravara, chena rinoramba riri iro rinoonekera ruvara, nevanhu vazhinji vachisarudza chena seruvara rukuru rwemakabati ekugezera, macomputer, madziro eshawa uye madziro akazara. Pamatafura, vanopfuura 51% yevakabvunzwa vakasarudza chena, pamberi pevara (15%), grey (14%) uye beige (9%), iine huwandu hwevakabvunzwa vakasarudza kudonha kwemavara nezvikamu zvina muzana.
Out8 Kubva gumi Vakapindura Vakasarudza Kuchinjisa Bhenji Yadzo Yemwenje.
Gore rino, vasere kubva kugumi vakapindura vakasarudza kugadzirisa magetsi avo ekugezera. Pakati pavo, kusarudzwa kukuru kwemarambi akadzika madziro (8%) nemwenje yakadzokororwa (10%), ichiteverwa nemwenje yekugezera (58%), mwenje we fan (55%), mwenje yegirazi (32%), iko kusarudzwa yemwenje mwenje yakawedzera ne25 muzana mapoinzi pamusoro pegore rapfuura, inokodzera kutariswa nemabhati ekugezera uye vekugeza magirazi vagadziri.
- Dzimwe Pfungwa -
1, Avhareji mutengo wekugadziriswa kweimba yekugezera kwevaridzi vedzimba veUS $ 8,000, inenge RMB 53,000.
2, Vasati vagadziridza imba yekugezera, 69% yevakabvunzwa vakati vatove vasina kugutsikana neyekugezera yekare, kubva pa59% mu2019.
3, kunyunyuta kukuru kwevaridzi vedzimba dzekuAmerica pamusoro pedzimba dzavo dzekugezera kuri pamusoro pekushomeka kwenzvimbo yekuchengetera (34%), nzvimbo shoma yekugezesa (34%), mwenje usina kukwana (29%) nenzvimbo yakaganhurirwa yekupokana (25%).
4, 59% yevakapindura vakati vachazorora muimba yekugezera, kuwedzera kwemazana mana muzana kubva gore rapfuura.
5, Vanenge vatatu-venzvimbo yevakapindura vane maviri kana anopfuura magirazi mune yavo tenzi yekugezera.
6, Zvina-zveshanu zvevakabvunzwa vaizobhadhara nyanzvi kuti vabatsire kugadzirisa imba yavo yekugezera, nevagadziri vane mwero wepamusoro wekutora chikamu pa43 muzana, ichiteverwa neyekugezera fitters (20 muzana) uye vagadziri vekugezera (12 muzana).
Pakapfuura :: Yakasarudzwa neNASA, Aya Matoileti matatu Ari Kuenda Kumwedzi! Zvadaro: Zvekuita Kana uchitenga Iyo Kicheni Faucet